IZIQITHI EZIBINI ZETIER KITCHEN (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iziqithi ezibini zeTier Kitchen (Iingcamango zoyilo)
Iziqithi ezibini zeTier Kitchen (Iingcamango zoyilo)
Nasi isikhokelo sethu kwiziqithi ezibini zekhitshi ezibandakanya iindlela ezahlukeneyo, ukubekwa kunye nokuphakanyiswa kwemibono yoyilo lwesidlo sakusasa. Isiqithi esinee tier ezimbini zekhitshi sinokuba luncedo ukongeza kwikhaya elixakekileyo ukubonelela ngeendawo zokuhlala zokutya-ekutyeni nasekuzonwabiseni. Zininzi iindlela zokuphumeza olu hlobo loyilo luthandwayo kuyilo lwakho lwekhitshi.
Yintoni isiQithi seKhitshi ezimbini?
Ngaba iziqithi ezibini zekhitshi ziziqithi?
Uyilo lweSiqithi seKhitshi ezimbini
Isiqithi esi-2 seTier Kitchen esinendawo yokuhlala
Isiqithi sanamhlanje seTier Kitchen
Isiqithi saseRaised esinetafile eyakhiweyo
Isiqithi seKhitshi kunye neBhara ekhulisiweyo
Ukuguqula isiQithi seKhitshi esi-2 sibe liNqanaba elinye
Isiqithi esineekhitshi ezimbini sakhiwe ngesiqithi esiqhelekileyo sasekhitshini, nesongezo sokuphakama kwebar ekhawulweyo ebekwa kumda ongaphandle wesiqithi.
Kwezinye iimeko, indawo ephantsi, esemgangathweni yokuphakama kwetafile inokuqhotyoshelwa endaweni yomphakamo webar.
Olu hlobo lwesiqithi sekhitshi luhlala lusetyenziswa kwiindawo ezivulekileyo zesicwangciso, apho ufuna ukwahlula ikhitshi kwezinye iindawo zendlu, ngelixa usandisa indawo yomgangatho.
Ubulumko obudumileyo, iziqithi zasekhitshini ezinamacala amabini azithandwa njengakuqala, ngakumbi abo banezongezo zebar. Kodwa njengalo naluphi na uphawu lwendlu, kubalulekile ukuba uyijonge ngokwembonakalo yecala lomsebenzisi, ugxile kwimisebenzi yayo kunye nendlela eya kuyilungela ngayo indlela ophila ngayo, endaweni yokujonga izinto.
Iindlela zamva nje ziye zathanda imvakalelo evulekileyo ngakumbi kunye nokukhanya kuyilo, yiyo loo nto ukhetho lwesahlulelo esimbalwa, esisizathu sokuba isiqithi esinee-tier ezimbini zekhitshi ezine-bar counter kwelinye icala zilahlekelwe kukuthandwa kwayo.
Kuba ikhawuntari yebha iphezulu, inokuziva inamandla, kwaye inokuthi ngandlel 'ithile ibonakale ngathi izahlulelo phakathi kwezithuba. Kodwa ukujonga imeko yokusebenza, kunokuba lukhetho olufanelekileyo kuwe.
Ihempe zomtshakazi zeqela le-bachelorette
Umzekelo, ukuba amalungu osapho lwakho akwicala elide, kwaye isitulo sokubala asonwabanga, okanye ukuba ukhetha iindwendwe ukuba ungawuboni umonakalo emva kwekhawuntari yakho yokusebenza, ke ukuphakama kwebha yokuphakama kwebha yokuphakama kwekhitshi yesiqithi kungabakho wena.
Ukuyila indawo yasekhitshini kufuneka kuhlala kusekwe kwiimfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo, kunokuba uxhomekeke kwimikhwa. Oku kuyinyani ngokukodwa ukuba usebenzisa ikhitshi lakho ngokubanzi - umsebenzi owenziwe kakuhle wekhitshi ngokweemfuno zomsebenzisi.
Ukuba ucinga ukongeza isiqithi sekhitshi elinemigangatho emibini, vavanya imfuno yakho ngokubona indlela enokuthi izuze ngayo inkqubo yomsebenzi wakho okanye umsebenzi wekhitshi ngokubanzi.
Le khitshi inoyilo olunomdla kunye neziqithi ezibini. Isiqithi esincinci siqukethe imiphezulu yeetafile zegranite kunye neovini eyakhelweyo. Ngelixa isiqithi esikhulu sikunika ibha yesidlo sakusasa se-tier ngobuninzi bendawo yokugcina yokugcina izinto, isinki enkulu yefama, isitya sokuhlambela isitya esingenasici kunye nesibane sangoku. Bona Okuninzi Uyilo lwesiqithi sekhitshi kabini Apha.
Uninzi lweekhitshi ezinamacala amabini ziya kudibanisa indawo yokuhlala kuyilo. Unokongeza nokuba yeyiphi ukuphakama kwebar-countertop okanye indawo yokuphakama yokutyela, eyokuqala ibe lolona hlobo luqhelekileyo.
Ngokubanzi, umphezulu wenqanaba lesibini usetyenziselwa indawo yokutyela eyongezelelweyo kunye nendawo yokuhlala ukwandisa indawo.
Kukho iimeko ezinqabileyo apho inqanaba lesibini lingasetyenziswanga kunye nezihlalo ezincedisayo, kodwa kwiimeko ezininzi, ukuhlala kuhlala kuyinto ebandakanyayo nakweyiphi na uyilo lwesiqithi sekhitshi ezimbini.
Ngelixa iziqithi zekhitshi ezinamacala amabini zixhaphake ngakumbi kuyilo lwasekhitshini oludala, unokuba nalo olu hlobo lwesiqithi sekhitshi nakweyiphi na indawo yanamhlanje, ngokusebenzisa nje ii-silhouettes zale mihla kunye nezixhobo.
iilokhwe zomtshato zamagxa abanzi
Ngokungafaniyo nesimbo sodidi lwakudala iziqithi zasekhitshini ezibini, ukuphindaphindwa kwale mihla kuhlala kuneejika ezimbalwa kunye nokubumba okuhombisayo.
Kutshanje, kusetyenziswa indawo ekuthiwa yi-waterfall countertop ye-bar-level counter kuye kwathandwa, ngakumbi uyilo lwasekhaya kunye nolwakhiwo lweekhitshi.
Isiqithi saseRaised esinetafile eyakhelweyo
Iindawo zala maxesha zihlala zinendawo yomgangatho ongaphantsi yokusebenza nayo, ke iziqithi zasekhitshini ezineetafile ezakhelweyo ziye zabona imeko enokwenzeka. Ngokuncamathisela itafile yokutyela kwikhawuntara yesiqithi sekhitshi, uyakwazi ukwandisa isithuba sakho somgangatho.
Nangona kunjalo, kwiindawo ezinkulu, ukongezwa kokutya-okongezwayo kwikhawuntara yesiqithi kuhlala kusebenza njengendawo yokutya eqhelekileyo. Yitafile elungileyo yesidlo sakusasa, ngakumbi ukuba awuyongxaki yokuhlala kwizitulo zebha isidlo sakusasa, okanye unabantwana abancinci endlini.
Iziqithi zasekhitshini ezinemiqolo emibini enesitrato esiphakamileyo zezona zixhaphakileyo kwaye zihlala zakhiwa ngombono wokonwabisa ngaphambili.
Oku kukuvumela ukuba wenze imisebenzi yakho ekhitshini ngelixa abahlobo kunye nosapho bexhoma ebharini. Inqanaba lekhawuntari eliphezulu liya kuthetha ukuba ukungcungcutheka kwakho okwenzeka kwikhawuntara eyintloko yesiqithi akuyi kufikelela kumphezulu wecomputer.
Le yikhitshi lesitayile esine-classic iphakethe yokuphakamisa ibha Isiqithi esineekhitshi ezimbini. Kuyilo, iziqithi ezibini ezinemiqolo zisebenza njengesahluli sendawo, sahlula ikhitshi kwiindawo zokuhlala nezokutya. Ukuphakama kwendawo yokujikeleza ibha okuphakathi nendawo kuye kwahlala iindawo zokuhlala ngokudibeneyo ukuze kwandiswe indawo.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lusebenzisa uyilo olukhulu lwesiqithi sekhitshi olunetafile yokutyela eyakhelwe-ngaphakathi kumda wangaphandle wekhawuntari. Itafile yokutyela enezihlalo ezi-5 isebenzisa umphezulu wamatye, ke xa ungayidingi njengendawo yokutyela, ungayisebenzisa kwakhona njengendawo yokusebenzela eyongezelelweyo. Bona Okuninzi iziqithi zasekhitshini ezinkulu ezinezihlalo kweli phepha.
Le yenye ikhitshi enesimbo esiqhelekileyo esisebenzisa isiqithi sekhitshi esine-tier esine-bar counter ephakanyisiweyo ekugqibeleni. Kolu luyilo, uya kuqaphela ukuba kukho ukugcinwa kwewayini okudityanisiweyo kwisiqithi sasekhitshini, ke indawo yokuphakamisa ibha enokubakho iyindawo enokusetyenziselwa ukungcamla okanye ukusela iwayini.
Esi siqithi sasekhitshini sanamhlanje songeza kwindawo ekuthiwa yimithi eqinileyo kwindawo ekuthiwa yi-wood countertop kwindawo yayo yokuphakama kwebha, inceda ukongeza umbala ofudumeleyo kunye nokuthambeka kwiphalethi yeetoni ezipholileyo.
Uncedo lokusebenzisa iinkuni kwindawo yakho yokuphakama kwebar kukuba kulula ukongeza, ukususa, kunye nokusebenzisa kwakhona.
Ukuba ucwangcisa ukongeza ulungelelwaniso lwenqanaba lesibini kwisiqithi sakho sasekhitshini kodwa ukhathazekile ungafuna ukususwa kamva, usebenzisa ukhuni olomeleleyo okanye ukhuni olaminethiweyo ukongeza kwisiqithi esele sikhona kuya kuba lula kwaye kungabizi mali .
Ukuba ikhawuntari yakho yesiqithi esekhitshini ekhoyo ayisasebenzi kuwe, emva koko unokucinga ukuba uyisusile ukuze ubenesiqithi esinye senqanaba elinye lasekhitshini.
iimaski zobuso ezinxibe umtshato
Kuxhomekeke kuyilo lwesiqithi sakho sekhitshi, oku kunokuba okanye kungabi lula ukulungiswa. Ukuba ibha okanye indawo yokutyela yimodyuli yokongeza, kuya kuba lula ukuyisusa, kodwa ezinye uyilo ziyakhele kwisiqwenga esinye, ke ezo meko zinokuba nzima ngakumbi ukuzilungisa, kodwa kungenzeki.
Qaphela nje ukuba ufuna ukuguqula i-countertop ephezulu okanye esezantsi ukongeza kwinqanaba le-countertop eliqhelekileyo, unokufuneka ubeke endaweni yonke i-countertop ukuze ibe yinto enye, okanye ukuba awukhathali isikhewu kwindawo yakho yokubaleka, unokuphinda uyisebenzise.
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene noko ndwendwela igalari yethu Uyilo lweziqithi zasekhitshini Apha.
umtshato yinto esidibanisa namhlanje
Isongelo soboya besinxibo somtshato
umdala kangakanani u-amy schumer
Ufumana njani isihluzi se-snapchat sakho
UTom brady kunye nomtshato we-gisele